I-Cottage eyenziwe ngesandla kwi-Redwoods
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTanya
Le ndawo yokubaleka iyimfihlo ibonelela ngeyona ndawo intle yehlabathi: intle, indawo yasemaphandleni enemizuzu eli-10 yokuqhuba (okanye imizuzu engama-30 yokukhwela ibhayisekile) ukuya kuzo zombini edolophini e-Eureka nasembindini wedolophu yaseArcata. I-cottage ilungele abantu aba-2, kodwa iyakwazi ukuhlalisa abantu aba-4.
I-Creekside Commons yindawo entle edibeneyo yokuba kunye neehektare ezintlanu entliziyweni ye-redwoods. Usukelo lwethu luquka ukuphelisa imida nokusukela izinto ezifanayo xa kunokwenzeka. Enye injongo esinayo ngokufanayo kukukwazi ukunika impiliso kunye nokuphumla okupholileyo kwiindwendwe zethu. Nokuba ukhetha ukuhlala kwi-Cottage okanye kwiKhabhinethi sinethemba lokuba ukuhlala kwakho nathi kuyahlaziya kwaye kuyathandeka.
I-Cottage yindawo epholileyo kwaye ecocekileyo enegumbi lokuhlala eli-1 elinezandla ezenziwe ngesandla kunye nobugcisa kulo lonke. Igumbi lokuhlala linokuguqulwa ngokulula libe ligumbi lokulala lesibini labucala kwiindwendwe ezimbini ezongezelelweyo. Ngena ngaphandle komnyango ongasemva kwaye ungene kwi-redwood grove, yonwabele imifuno emitsha evela kwigadi yethu yezinto eziphilayo, zonwabele kwindawo yokuhlambela yangaphandle okanye uchithe ubusuku ngasemgodini womlilo.
Amanzi acocekileyo yidolophu encinci ethandekayo phakathi kweArcata kunye ne-Eureka. Ungonwabela iipaki ezikufutshane kwaye uhambe kwaye ujikeleze indawo. Abantu abaninzi bayakuthanda ukukhwela iibhayisekile zabo benyuka iinduli neentaba ezikufutshane. Igrange yamanzi acocekileyo ibamba inyanga nenyanga (iCawe yoku-1 yenyanga) isidlo sakusasa sepanekuku esisekwe eluntwini.
Sihlala kwipropathi kwaye sihlala sikhona ngexesha lokuhlala kweendwendwe. Siyavuya ukukubulisa kwaye sikubonise indawo kwaye sifumaneke kuzo naziphi na iimfuno onokuba nazo. Sikwafuna ukuqiniseka ukuba sikunika ukhuseleko oluninzi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arcata